Namuhla zonke izinkulisa, isikhungo esincane noma isikole sisebenza ngendlela ethile, siyikhetha emakhulwini amakhulu athuthukile futhi ahlongozwa ngabachwepheshe. Othisha nabafundisi kudingeka bahlele uhlelo lokuthuthukiswa konyaka ozayo wezemfundo, amaphrojekthi ancike ekuthandweni nasekuqondisweni kweziko lesandulela esikoleni nasemfundo.
Izinhlelo zegeyimu zezingane. Imigomo kanye nezinhloso
Izindlela zanamuhla zokuthuthukiswa kwezingane njengezingane ezincane kanye nesikole esikoleni zisekelwe emdlalweni. Ochwepheshe bathi ingane edlala kangcono ifunda futhi ikhumbula indaba. Izinhlelo zegeyimu zezingane zihlose ukwenza izingane zibe izilaleli ezikhuthele nabahlanganyeli bokuqala. Imiklamo yaloluhlobo ihlanganisa izindlela zokuheha nokukhulisa ama-horizons awo. Ukudlala, kulula ukudlulisela ulwazi lwezingane mayelana nemvelo, umhlaba, umphakathi. Imisebenzi eyinhloko yokuqhuba izinhlelo zezemidlalo, elandelwa othisha, yilezi:
Inhlangano yemisebenzi yokuzilibazisa nokuqonda kwengane;
Ukubandakanya izingane ezenzweni;
Ukwakhiwa kwesidingo sendlela efanele yokuphila;
Ukuhlinzeka ngezimo zokuthuthukiswa ngokomzimba, ngokwengqondo nangokomoya;
Ukudalwa nokuhlelwa kwemibandela yokuzimela nokuziqhenya.
Izinhlelo zemidlalo zezingane zisekelwe ezindleleni ezihlukahlukene, eziyinhloko zazo:
Izingxoxo ezihlokweni ezihlukahlukene (ukuqonda, ukubhala, umlando, ukuziphatha, ukuthanda izwe);
Imibukiso ephathekayo esihlokweni esithile;
Amakilasi ezihlakaniphile (uhlelo lokuziqonda izingane);
Imincintiswano yemidlalo, izinhlanga ezithunyelwa, ama-marathons;
Ngenxa yalokho, abahlanganyeli ohlelweni lomdlalo bazovula amathuba abo okudala, bazobandakanyeka ezweni elisha elithakazelisayo nelwazi, bazokwazi ukuthola amakhono okuxhumana abalulekile, ulwazi namakhono.
Izinhlelo zegeyimu ezinganeni zasenkulisa
Yonke imisebenzi enokuzicabangela-yokuzijabulisa ihlukaniswa ngokwezinqubo ezithile. Enye yezinto eziyinhloko yikhathi sezingane, ukuthuthukiswa okubhekiswe kuloluhlelo. Kubantwana bezingane zangaphambi kwesikole, amaphrojekthi amaningi kakhulu ezokuzijabulisa. Le midlalo ihlanganisa:
I-Didactic (isibonelo, "Thola ibhola", "Qoqa umqaphi weqhwa");
Izinhlelo zegeyimu izingane zesikole
Kwabafundi, izenzakalo zinokugxila kokubambezeleka okukhulu. Zihloswe ekufundeni ikharityhulam futhi zidlulise ngempumelelo izivivinyo nezivivinyo. Namuhla, izinhlelo zokudlala izilimi zakwamanye amazwe zithandwa kakhulu, ezenza kube ngcono ukufunda nokukhumbula ngekhanda. Ekupheleni konyaka wesikole, imisebenzi yokuqonda nokuthuthuka iyaqhubeka emakamu esikoleni . Izinhlelo zegeyimu zezingane ehlobo zimelelwa ikakhulu ngemisebenzi yokuzilibazisa kwezemidlalo. Ukuncintisana kubambe iqhaza ekuzijabuliseni nasekuthuthukisweni komzimba kwezingane. Ngokuvamile, imicimbi yezemidlalo ihambisana nezinhlelo zegeyimu, injongo eyinhloko yokugcwaliseka kwemisebenzi ethile.
Colic emathunjini ezinsana. Izimbangela nezindlela zokwelashwa
Ukudla okunamaprotheni okuphumelelayo: imenyu izinsuku ezingu-14
Experience izingane ekhaya - isimangaliso sangempela!
Komzimba, izimbangela zazo kanye Izindlela zokwelapha